युरिक एसिड बढ्यो ? युरिक एसिड बढेकाले के खाने, के नखाने ? यस्ता सजिला कम गर्ने उपाय - ज्ञानविज्ञान
यूरिक एसिड रगतमा पाईने एउटा महत्वपूर्ण पदार्थ हो । तर जुनसुकै कारणले भए पनि युरिक एसिडको स्तर सामान्य अवस्थाको भन्दा उच्च भएका खण्डमा यो पदार्थले शरीरमा बिभिन्न खालको समस्या उत्पन्न गर्न सक्दछ ।
यो अवस्थामा एकैपल्ट दुईवटा कुराले युरिक एसिडको स्तर रगतमा उच्च पार्न ठूलो सहयोग पु¥याउछ । त्यो हो युरिक एसिडको शरीरमा उत्पादन प्रचुर मात्रामा पनि हुनु र साथै मृगौलाले सामान्य अवस्थामा पिसाव भएर निष्कासन गर्नु पर्ने युरिक एसिडको पनि मात्रामा ह्रास आउनु ।
फलस्वरुप रगतमा युरिक एसिडको स्तर बढ्ने गर्दछ । भोको अवस्थामा मृगौलाबाट ‘किटोन’ भन्ने पदार्थ निष्कासन हुन थाले त्यसले युरिक एसिडको निष्कासनमा ज्यादै बाधा पु¥याएर रगतमा युरिक एसिडको स्तर उच्च गर्दछ । रक्सी, खास गरेर बियरले, शरीरमा पानीको अभाव गरेर युरिक एसिडको मात्रा बढाउँछ ।
युरिक एसिड उपचारको मुख्य उद्धेश्य रगतमा ६ मिलिग्राम भन्दा तल्लो स्तरमा युरिक एसिडलाई सन्तुलनमा राख्नु हो । त्यसो गर्नाले बिरामीको जोर्नी वा शरीरका विभिन्न भागमा युरिक एसिडका मणिहरु थिग्रिन पाउँदैनन् । पिसाबको अमिलोपना घटाएर पनि मृगौलाबाट बढी मात्रामा युरिक एसिड निष्कासन गर्न सकिन्छ ।
ग) प्रशस्त मात्रामा खान हुने
युरिक एसिड बढ्यो ?
युरिक एसिडले हाम्रो शरीरमा एन्टीअक्सिडेन्टको रुपमा काम गर्छ, जसले हाम्रो रक्तकोषिमा हुन सक्ने अदृष्य असरबाट बचाउन मद्दत गर्छ । त्यसैले पनि, युरिक एसिडको लगातारको आपूर्ति हाम्रो शरीरको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
यो भिडियो पनि हेर्नुहोस् :
Don't Miss it बेमौसमी तितेकरेला खेती बारे सम्पूर्ण जानकारी, जानिराखाैँ
Up Next गर्मी मौसममा पाइने खर्बुजाका फाइदा – शितल पनि हुने र यस्ता रोगहरुबाट पनि बच्ने
खानपान, भान्छामा औषधी, स्वास्थ्य
तितो करेलाले कस्ता रोगहरु निको पार्छ ? थाहा पाईराख्नुहोस् !
तितो करेला खादा कति पयलाई करेलाको तितो स्वाद मन पर्दैन त कति पयलाई अत्याधिक मन पर्छ । स्वादका हिसावले मन…
निम्न उपायहरु अपनाएर रुघाबाट बच्न सकिन्छ
१. मास्क को प्रयोग गर्ने :- रुघा लागेको समयमा मास्क प्रयोग गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । किनभने मास्कको प्रयोग गर्नाले…